Luis Enriue Oo Ugu Danbayn Faah Faahin Ka Bixiyay Khilaafkii Waynaa Ee Lionel Messi U Dhexeeyay Iyo Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Shaqada Barcelona Iskaga Casilay Oo Shaaciyay. – Latest Sports News
Luis Enriue Oo Ugu Danbayn Faah Faahin Ka Bixiyay Khilaafkii Waynaa Ee Lionel Messi U Dhexeeyay Iyo Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Shaqada Barcelona Iskaga Casilay Oo Shaaciyay.
Sanadkii 2014 kii maamulka kooxda Barcelona ayaa Camp Nou u magacaabay Luis Enrique wuxuuna badalay Gerardo Martino oo Barcelona la soo dhibtooday laakiin Enrique ayaa awooday in xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay uu Barcelona ku hogaamiyay saddexda koob ee Champions League, La Liga iyo Copa Del Rey wuxuuna sii raaciyay dhamaan koobabkii ka soo baxay ku guulaysigii koobabka hore.
Laakiin intii lagu jiray xili ciyaareedkii 2014/15, waxaa xumaaday xidhiidhkii Lionel Messi iyo Luis Enrique iyada oo waqtigaas ay jireen warar badan oo sheegayay in uu gabi ahaanba burburay xidhiidhkii u dhexeeyay Messi iyo Enrique.
Arinta khilaafkii Luis Enrique iyo Lionel Messi ayaa la sheegay in uu ka soo bilawday kulankii uu Luis Enrique kursiga kaydka dhigay Lionel Messi ee ay guuldarada kala soo laabteen Real Sociedad kaas oo noqday kulan qalalaase ku abuuray Barca isla markaana ay dirqi kaga soo kabsadeen.
Laakiin Luis Enrique ayaa iska casilay shaqadii Camp Nou waxaana ugu danbayn badalay Ernesto Valverde oo xili ciyaareedkiisii labaad hogaaminaya Blaugrana balse Enrique ayaa waraysi uu bixiyay ugu danbayn ku shaaciyay in uu khilaaf kala dhexeeyay Messi halka uu sidoo kale sharaxaad ka bixiyay sababtii dhabta ahayd ee uu isku casilay.
Luis Enrique oo ka hadlaya khilaafkii Messi kala soo dhexeeyay ayaa yidhi: “Ilaa intii dhibaatada la xalinayay waxaa jiray waqti ay xiisadi taagnayd taas oo aanan sinaba anigu ku raadsan laakiin waxay ahayd mid dhacday oo u baahnayd in la maamulo. Laakiin maanta wax wanaagsan oo kaliya ayaan ka sheegi karaa Lionel Messi”.
Luis Enrique oo ka hadlaya waqtigii uu maamulka kooxdiisa ku war galiyay in uu shaqada iska iska casilayay ayaa yidhi: “Bilawgii xili ciyaareedkii saddexaad waxaan markiiba kooxda ka dalbaday in ay bilaabaan raadinta badalka, waxaanan ugu sheegay qaab danaysi ah, maan hayn wax tamar dheerad ah oo aan bixin karayay”.
Enrique oo sababtii dhabta ahayd ee uu isku casilay sii sharaxaya ayaa yidhi: “Waxaan sidoo kale ka fikray in kooxda ciyaartoydan ah oo ahaa kuwo khaas ah in ay wax sahlan ii ahayd in aan anigu heshiiska cusboonaysiiyo. Waxaan u jeedaa, waxay ahaan lahayd waxa aduunka ugu sahlan in aan heshiis wayn saxiixo oo aan gurigayga la sii joogo ciyaartoyda aduunka ugu fiican, laakiin si adag ayay u fiicnaan kartay”.
“Laakiin haddii aan daacad ahaado, waxaan ka fikirayay in ciyaartoydaasi ay u bahnaayeen waji cusub oo waxyaabaha si ka duwan ugu sheega. Waxaan filayaa in uu imanayo waqti marka aad fariin dirto in haddii ay fariini jirto uu waqtigeedu dhacayo, waxaanad u baahan tahay in aad fariin dirto” ayuu Enrique hadalkiisa raaciyay.
Laakiin Ernesto Valverde ayaa si layaableh u maamulay Lionel Messi isaga oo aan xataa wax dhibaato ah ku qabin in uu kulaamda uu doonayo nasiyo xidiga reer Argentina.